कसरी गर्न सकिन्छ जो एक केटी मिति बालिका: आफ्नो पाठ्यक्रम लागि डेटिङ ओटो
हामी गरिएको मा यो व्यापार को कला लागि लगभग छ वर्ष, जसको अर्थ हामी गर्नुभएको हो एक कुरा वा दुई बारेमा कुरा वा दुई: जस्तै हुन कसरी एक गर्ने महिला भेट्छन्, इच्छा र महिला वा अन्यथा-पहिचान मानिसहरूलाई बाहिर त्यहाँ. त्यसैले हामी यो लाग्यो सुन्दर हुन सङ्कलन गर्न एक समलैंगिक डेटिङ लागि, तपाईं को सबै शानदार गाइड कसरी- ‘ प्रकाशित अन्तिम भन्दा धेरै. ‘ को एक धेरै सम्बन्ध मा सल्लाह कसरी हुन समलिङ्गी र एक धेरै व्यक्तिगत सामयिक निवन्ध र रिपोर्टहरू देखि, क्षेत्र —, भइरहेको द्विपक्षीय ठीक मा कामदेव, डेटिङ गर्दा सचेत डेटिङ, मा स्पेक्ट्रम, के तपाईं सिक्न देखि बढ मा आफ्नो प्रेमिका संग, बीचमा यति धेरै अरूलाई— तर यो पोस्ट सबै कुरा को लागि कसरी-खिलौने. (तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ भने विभाजन सल्लाह, तपाईं राम्रो पकड आफ्नो घोडाहरू लागि अर्को मुद्दा को राम्रो सँगै।) जवाफ त हामी कहिल्यै छ जवाफ: फेरि कसरी नरक के तपाईं पूरा अन्य बालिका गर्ने बालिका रुचि? बाहिर ल्याउन. अरे कसैलाई चाहनुहुन्छ एक सानो केटी-मा-केटी संस्कृति. मा आफ्नो प्यान्ट? ‘ कुनै पनि प्राप्त छैन भने तपाईं आफ्नो प्यान्ट मा । त्यो को एक धेरै सुझाव फिनिक्स संग साझेदारी गर्न चाहन्छु — तपाईं कसरी मा मारा र प्राप्त गर्न बालिका संग मिति मा जाने तपाईं या शायद एक दिन खाने छ, पिज्जा खान, पूरा आफ्नो आमा छ, र.
यो ठीक महसुस गर्न मूर्ख छ । यो ठीक सुन्न ‘जार को हृदय’ मा पुनरावृत्ति । अरे, तपाईं छन् जो एक केटी बालिका रुचि? के तपाईं चाहनुहुन्छ ती बालिका आउन अधिक र शायद रात बिताउँछन्? यहाँ कुरा कसैले वृद्धि गर्न सक्छन् रही आफ्नो संभावना केही लेसबियन प्रेम । यो कडा लागि बाहिर त्यहाँ एक यौन सक्रिय — तपाईं कसरी प्राप्त गर्न सुरक्षित सेक्स जानकारी तपाईं आवश्यक जब तपाईं डराएका छौं जिम र समलैंगिकों बेवास्ता गर्दै मा सेक्स अन्त? खैर हामी मिल्यो छु एक डाक्टर मा घर छ । पनि एक कार्टूनिस्ट.
साँच्चै तपाईं हेर्न को कार्टून
यदि तपाईं गति गर्न सक्छन्, मिति, तपाईं गर्नुपर्छ । र तपाईं बाहिर मदत गर्न, हामी पुगेको मा गहिरो हाम्रो समुदाय र संकलित केही सुझाव र तपाईं प्राप्त गर्न माध्यम जंगल छ । तपाईं खाएका भन्दा विशाल बाधा को कसरी सिक्ने मान्छे भेट्न महिला? अब तपाईं सामना भीषण कार्य पत्यार पार्र्ने ती मान्छे, महिला आसपास रहन — ठीक? समलैगिंकों मा विफल भएका छन् रोमान्स लामो पर्याप्त, यो समय तपाईं कसरी सिक्न के यो सही हो । हामी मिल्यो छु एक पोस्ट को लागि कि. सेक्स थियो? तपाईं महसुस गर्न शुरू एक सानो चिन्तित? सबैलाई छ शुरू गर्न जस्तै हेर्न आफ्नो प्रकार? तपाईं खींच ब्याट्री देखि टाढाको नियन्त्रण मा राखे आफ्नो भाइब्रेटर? तपाईं विकास अविवेकी डाह तिर मान्छे छन्, जो सेक्स भएको बेला पनि भावना बाहिर जोड र काल छ जब तपाईं सोच्न पा को आफ्नो? खैर, म मिल्यो गर्नुभएको लागि धेरै विकल्प बैठक आफ्नो अर्को र भए तापनि यो एक, नयाँ विचार — वा मौका छ । को प्रकाश मा मेरो आफ्नै, सबैभन्दा अक्सर विषयमा «बिहान पछि,» ‘ प्रयास गर्ने निर्णय र ब्रेक (र राजनीति) मा तल यो घटक भागहरु । म बस बाथरूम जान र आउन कहिल्यै बाहिर? म गर्नुपर्छ नक्कली एक हृदयघात? तिनीहरूलाई बताउन अवधि र यो सिर्फ एक सुन्दर गडबड कि म रोक्न आवश्यक र उपासना? ती लागि जो तपाईं चाहनुहुन्छ एक सानो निर्देशन मा आफ्नो बेडरूम, हुन सक्छ सहायता । «के गरेको आफ्नो हस्ताक्षर?» छ एक पूर्ण वैध टिप्न-अप लाइन, र गरौं छैन जो कोहि बताउन तपाईं अन्यथा छ । यो पुस्तिका, म छान्नुभएको गर्नुभएको सामना गर्न सूर्य संकेत मात्र रूपमा, को जमात को संयोजन संलग्न संग चन्द्र संकेत र र ग्रह एक तीव्र प्रतिबद्धता, कम से कम भन्न. ‘ साँच्चै चासो मा आफ्नो जटिल संग अनुकूलता अरू कसैले सोच्न, रही एक सितारा चार्ट गरेको, यो हुनेछ रूपमा तपाईं बताउन भन्दा बढी सूर्य चिन्ह एक्लै । जहाँसम्म म चिन्तित छु, वर्जित, कुनै यस्तो कुरा एक रूप उमेर फरक हुँदा पनि ठूलो नभएसम्म यो समस्या प्रस्तुत दम्पतीको लागि. ठूलो मतभेद, अधिक संभावित समस्या छ । तर कुञ्जी शब्द छ संभावित । म सँगै राख्नु छन् लागि केही सुझाव सीआईएस मा महिला सोचाइ माध्यम केही आधारभूत ट्रान्स मुद्दाहरू सहित, विचार मा पुग्न ट्रान्स महिला मा एक रोमान्टिक वा घनिष्ठ. र म हुन चाहनुहुन्छ भन्ने स्पष्ट मार्फत काम यो सामान लागू हुन्छ नै को सन्दर्भ मा एक आकस्मिक रूपमा यो एक रोमान्टिक मिति. धेरै सम्बन्ध मा विभिन्न स्तर संग धेरै फरक मानिसहरूलाई आवश्यकता छ एक मजबूत सम्बन्ध कौशल सेट बनाउँछ भन्ने पाली सम्बन्ध पीएचडी मानव बातचीत को — छैन राम्रो भन्दा अन्य प्रकार को सम्बन्ध, तर निश्चित अधिक जटिल छ । यहाँ पाँच सिद्धान्तहरू गर्न केन्द्रीय सफल गैर- साझेदारी सुधार गर्न सक्छन् भनेर मूलतः कुनै पनि सम्बन्ध छ । त्यसैले, आकस्मिक डेटिङ मरेको छ, र म एक मिशन मा फिर्ता यो ल्याउन यो काम गाइड संग गर्न के नरक संग मा जाँदै छ र तपाईं कि केटी । कहिलेकाहीं भएको एक «भिडियो» डेटिङ प्रोफाइल को बारे मा छैन डेटिङ, सञ्जाल, वा मित्र बनाउन. कहिलेकाहीं तपाईं यो छ लाग्छ, तर त्यसपछि यो बतासलाई माथि भइरहेको छैन । म यहाँ छु, तपाईं बताउन किन कुनै विफलता मा «भिडियो डेटिङ», केवल फरक कोण को सफलता । उनको दिन समय दिन, उनको प्रेम र समर्थन, र जब त्यो गर्न तयार इन्द्रेणी झण्डा बम्पर स्टीकर मा उनको कार, त्यसपछि त्यो हुनेछ । जसमा हामी छलफल गर्न भन्दा साधारण र कुनै एकै जनासित मात्र विवाह गर्न एक प्रयास मा मदत सबैलाई । एक नातेदार रूपमा गुटदेखि बाहिरको व्यक्ति «भिडियो डेटिङ» खेल, एक संभवतः नयाँ दृष्टिकोण यस अनलाइन डेटिङ खेल गर्न इच्छुक ती मान्यता र लिन एक मौका छ । ओटो टीम सदस्यहरु साझेदारी हाम्रो बारेमा विचार गर्दा हामी, किन हामी र के कतै अर्थ हाम्रो लागि छ । म स्वीकार छौँ, कहिलेकाहीं मेरो मनपर्ने भाग विगतमा सम्बन्ध गरिएको छ दूरी, तर कहिलेकाहीं लामो दूरी के थियो भङ्ग हामीलाई माथि छ । कुनै सही छ वा गलत बाटो मा हुन एक लामो-लामो दूरी सम्बन्ध — शायद तपाईं फलाउन मा स्वतन्त्र वा शायद तपाईं बस आवश्यक मा रात. मुनाफा मा यो काम गर्न कसरी र कहिले थाहा छ यो भन्दा बढी छ कि छ । के मामिलामा तपाईं पहिले कदम मा सँगै छ कि तपाईं तयार छौं किनभने तपाईं छैनन् भने, तपाईं अनुभव हुन सक्छ परम कि नेटली र म, त्यसपछि शायद तपाईं प्राप्त हुनेछ एक प्रभाव पारेको किनभने तपाईं महसुस छैन पर्याप्त नजिक बारेमा कुरा गर्न असजिलो (शाब्दिक). तपाईं चाहनुहुन्छ तिनीहरूलाई स्पर्श, गन्ध र तिनीहरूलाई, तपाईं हुनुहुन्छ भने, मलाई गास आफ्नो कान । किन छैन सेना को भूगोल र भौतिक र्याली गर्न दुवै आफ्नो रुन्छिन् र गुना सम्म संसारमा जस्तै सम्म सामने ढोका आफ्नो घर चुम्बन? मा मेरो पहिलो राख्न कसरी एक केटी दस वर्ष को लागि, म अन्वेषण धारणा एकता को माध्यम, र रचनात्मकता. वृद्धि एक यहूदी र वर्षीय सीईओ, र सम्पादक-मा-मुख्य ओटो साथै एक अवार्ड विजेता लेखक, ब्लगर, भिडियो मेकर, कम-कुञ्जी शक्ति र महत्वाकांक्षी साइबर-प्रदर्शन जो कलाकार मिशिगन हुर्कनुभएको, हराएको उनको मन मा न्यूयोर्क र त्यसपछि लाग्यौं पश्चिम । उनको काम मा देखा छ नौ पुस्तकहरू सहित ‘यो राम्रो बडा तंग स्वेटर: हास्यास्पद महिला सुन्दरता मा, शरीर छवि र अन्य खतरहरुको भइरहेको महिला,’ पत्रिका सहित क्लेयर र वक्र, र सबै भन्दा वेब सहित नायलन, स्नायु, एमिली पुस्तकहरू र ईजेबेलले. त्यो थियो एक धेरै लोकप्रिय व्यक्तिगत ब्लग एकपटक एक समय मा, र त्यसपछि त्यो एल वचन, र त्यसपछि त्यो विचार थियो बनाउन यो ठाउँ, र अब यहाँ हामी सबै हो. मा, त्यो थियो मनोनीत लागि एक पुरस्कार लागि उल्लेखनीय डिजिटल पत्रकारिता.
ट्विटर मा उनको अनुसरण, र
← डेटिङ भिडियो - भिडियो डेटिङ
शुरू घूंट दर्ता - "भिडियो मिति" →